“Raharaha Rehavana Michel” : mifanenjana ny mpitsara sy ny polisy | NewsMada
“Raharaha Rehavana Michel” : mifanenjana ny mpitsara sy ny polisy
Enin-taona lasa no namonoan’ny andiana polisy ny mpitsara Rehavana Michel tany Toliara, ny 9 desambra 2011. Tokony hotsaraina eto Antananarivo, anio, ireo polisy miisa 39 voarohirohy. Tsy manaiky izany ireo raiamandreny any Toliara, sakanany avokoa ireo fiara mitondra polisy ho aty Antananarivo. Mitsipaka ny fanakantsakanana ny fitsarana ny Sendikan’ny mpitsara eto Madagasikara (SMM). Fifanenjanana ny raharaha… Hanao ahoana?
Mitsipaka ny fanakantsakanana ny fitsarana ny SMM
“Tiana ny manamarika fa ny tany tan-dalàna i Madagasikara. Koa na iza na iza, mety hiharan’ny lalàna. Tsy misy olona na andian’olona na fokonolona afa-kiteny fa tsy hanaiky hotsaraina na inona na inona antony. Izany koa no mahatonga ny olona sasany mihevitra fa afa-manao fitsaram-bahoaka avy hatrany izy ireo, fa tsy mila mandeha any amin’ny fitsarana.”
Io ny fanambaran’ny ny Sendikàn’ny mpitsara eto Madagasikara (SMM), novakin’ny filoha lefitra, Clément Jaona teny, Anosy, omaly, momba ny “Raharaha Rehavana Michel“, izay tsy eken’ny fianakaviana ny hanagadrana ireo polisy. Mampahatsiahy ny maha tany tan-dalàna an’i Madagasikara ny SMM, ary manainga ny rehetra hamela ny fitsarana hanao ny asany amim-pilaminana sy ao anatin’ny fahaleovantenany tanteraka.
Iangaviany hitandro ny fahaleovantenan’ny fitsarana koa ny minisiteran’ny Fitsarana sy ny Filankevitra ambony momba ny mpitsara (CSM), ary hanao izay hitandroana izany asam-pitsarana izany. Eo koa ny hametraka ny fiarovana ny mpitsara manao ny asany amin’ny fitsarana ady heloka bevava, sao misy hanohintohina ny filaminana.
Hotsaraina ireo voarohirohy rehetra
Hatao eto Antananarivo, anio, ny fitsarana ny “Raharaha Rehavana Michel“. Niharan’ny famonoan’ny andiana polisy maromaro io mpitsara io, ny 9 desambra 2011, ary namoy ny ainy tamin’ny fomba feno habibiana. Nisy ny fitoriana, ary nandeha ny fanadihadiana teny anivon’ny ambaratonga rehetra. Hotsaraina avokoa ireo olona rehetra voarohirohy tamin’iny raharaha iny, araka ny fanambarana.
Amin’ny fanajana ny soatoavin’ny tany repoblikanina: ny fitsarana irery ihany no manana fahefana hitsara sy hanameloka olona na iza na iza. Melohin’ny SMM ny endrika famonoana olona miendrika fitsarana, izay mahazo vahana manerana ny Nosy.
Tany tan-dalàna i Madagasikara, ary mitovy avokoa ny olom-pirenena rehetra manoloana ny lalàna: na ny mpitondra fanjakana na ny olon-tsotra, na ny mpanam-bola na ny tsy manana, na fotsy na mainty, na avy amin’iza na iza izy.
Sarotiny ny SMM amin’ny fanajana ny fahaleovanten’ny fitsarana, ary manakiana sy tsy mankato izay fomba rehetra atao mba hoentina hanohintohina ny asan’ny mpitsara sy ny fizotran’ny raharaham-pitsarana malalaka na amin’ny fomba inona na inona.
Ho sarotra ny raharaha
Etsy andaniny, mihenjana amin’izany ny polisy amin’ny alalan’ny raiamandreny (Jereo lahatsoratra etsy ambany). Hanao ahoana ny ho tohin’ny raharaha amin’izao fifanenjanana eo amin’ny raiamandreny any Toliara sy ny mpitsara izao? Indrindra ny amin’ireo polisy efa voarohirohy amin’ny “Raharaha Rehavana Michel”, mbola hiepoka tsy hamaly ny fiantsoana azy ireo… Iza no lehibe ankatoavina: ny raimandreny an-tanàna sa ny fanjakana na ny fitsarana?